စွမ်းအားမြင့်​ ဂီယာ​ဘောက်​ 18 speed transmission Ultra-Shift Transmission အ​ကြောင်း - Myanmar Automobile and Equipment Directory
Ultra-shift ​တွေမှာ Forward speed ကို 16 ချက်​ ၊ Backward speed ကို2ချက်​ ခွဲထားပါတယ်​ ၊ စကားမစပ်​ တချို့ Ultra-shift ​တွေကျ​တော့ Forward speed ကို 15 ချက်​ ၊ Backward speed ကို3ချက်​ ပြုလုပ်​​ပေးထားပါတယ်​ ၊ အများအားဖြင့်​​တော့ < Forward 16 and Reverse2> က များပါတယ်​
ဒီလို Gear ​တွေကို ရှုပ်​ရှက်​ခက်​​အောင်​ ဘြာ​ဖစ်​လို့ လုပ်​ထားတာလဲ ဆို​တော့ ... ရည်​ရွယ်​ချက်​ ရှိပါတယ်​ ၊ မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ ဆိုရင်​ Forward5ချက်​ Back 1 ဆိုရပါပြီ ... ဒါ​ပေမဲ့ သူတို့နိုင်​ငံမှာကျ​တော့ သွားရတဲ့ ခရီးနဲ့ အသုံးပြုတဲ့ လမ်းအ​နေထားနဲ့က ဒီကနဲ့ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်​ ၊ ​နောက်​တစ်​ခုက ဒီ​လောက်​များတဲ့ gear ချက်​​တွေကို ဘယ်​လိုကားအမျိုးစား​တွေမှာ သုံးလဲဆို​တော့ Long haul truck နဲ့ Heavy-duty truck ​တွေမှာ အဓိက သုံးပါတယ်​ ၊ gear အချက်​​ရေများသွားတဲ့အတွက်​ Engine ကထွက်​တဲ့ rpm ကို ​အ​သေးစိတ်​ အလုပ်​လုပ်​နိုင်​တဲ့အတွက်​ ဘယ်​​လောက်​ speed မှာ ဘယ်​ gear ကို သုံးရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်​လို့ရနိုင်​တာ​ပေါ့
Manual 18 speed ​တွေနဲ့ Automated Transmission ( AMT ) က အဓိက ကွာခြားချက်​က Clutch နင်းတဲ့အတံ မပါတာ ကွာသလို ၊ Gear မထိုးရတာလည်း ကွာပါတယ်​ ... အထဲမှာရှိတဲ့ Transmission အလုပ်​လုပ်​ပုံက သိပ်​မကွာပါဘူး ... Manual က ( မြန်​မာအ​ခေါ် ... တုတ်​ထိုး ) Synchronizer ကို Shifter က​နေ တိုက်​ရိုက်​ အလုပ်​လုပ်​​စေတာ ဖြစ်​ပြီ ... Clutch ပါတဲ့အတွက်​ Clutch နင်းရပါတယ်​ ၊ သူက​တော့ Manual Gear ထိုးသလို​ပေါ့
AMT ( Volvo နဲ့ MAN မှာ Semi-Auto ) .... က​တော့ ECA ( Electronic Clutch Actuator ) က​နေ အလုပ်​လုပ်​​ပေးတာ ဖြစ်​တယ်​ ၊ Gear အထိုး Clutch အလွှတ်​ သူဟာနဲ့သူ programming နဲ့ သွားတာ ဖြစ်​တယ်​ ... Gear ထိုးတဲ့အခါမှာလဲ Pneumatic system နဲ့သွားတာဖြစ်​လို့ Driver အ​နေနဲ့က ဘာမှ ​ထွေ​ထွေထူးထူး လုပ်​စရာ မလိုပဲ Steering ကို ထိန်း​ပေး​နေရုံပါပဲ ... အဲ့လိုပုံစံ US ထုတ်​ Muck truck မှာရှိတဲ့ mDrive မှာ ​တွေရပါတယ်​ < mDrive လို့ရှာပြီး Google တွင်​ကြည့်​ >
UltraShift gearbox ​တွေကို US နဲ့ Europe ထုတ်​ Truck ​တွေမှာ အထူးသဖြင့်​​တွေ့ရပါတယ်​ ၊ Long Huge Vehicle လို့​ခေါ်တဲ့ Transportor ​တွေမှာ Horse power မြင့်​ Engine ​တွေနဲ့ တွဲသုံးကြတာ ​တွေ့ရပါတယ်​ ၊ UltraShift ဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ Gearbox ကိုမှ special function သုံး Layshaft2​ချောင်းထည့်​ထားတာ ဖြစ်​တယ်​ ... Torque power များသွားတဲ့အတွက်​ Hp မြင့်​ Engine ​တွေနဲ့သာ သင့်​​လျှော်​တဲ့ Gearbox အမျိုးစားဖြစ်​ပါတယ်​ ၊ ဒီလို UltraShift ​တွေကို US ထုတ်​ Freightliner ၊ Mack ၊ Peterblit နဲ့ Kenworth စတဲ့ ​ခေါ်ရှည်​ Tractor ​တွေမှာ အထူးသဖြင့်​သုံးကြပါတယ်​
အသစ်​ဆန်းကို တီထွင်​ဖန်​​တီး​နေတဲ့ အ​နောက်​တိုင်းလူမျိုးများရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ... Ultrashift ​တွေဟာ လွန်​ခဲ့တဲ့ ဆယ်​စု​နောက်​အ​ကျော်​​လောက်​ကတည်းက အ​နောက်​နိုင်​ငံ​တွေမှာ ​ခေတ်​စားခဲ့​ပေမဲ့ ယခုအချိန်​ထိ မြန်​မာမှာ​တော့ ရှားရှားပါးပါး ​တွေ့ရခဲပါတယ်​ .... Ultra-Shift ကို အ​မေရိကန်​ Transmission company Eaton Fuller နဲ့ Allison ကအဓိက ထုတ်​လုပ်​ဖြန့်​ဖြူးသလို ဂျာမနီထုတ်​ ZF က​လဲ ထုတ်​လုပ်​ဖြန့်​ဖြူးပါတယ်​ ၊ အ​မေရိကန်​​တွေဟာ Engine power ကြီးကြီး နဲ့ ​ခေါင်းရှည်​ရှည်​ Truck ​တွေကို အထူးပဲ နှစ်​ခြိုက်​ကြပါတယ်​ ၊ ဒါ​ကြောင့်​ အဲ့ဒီလို Truck ​တွေဟာ အ​မေရိကားမှာ အထူးပဲ ​ကောင်းအား​ကောင်းကြတာ ဖြစ်​တယ်​
Ultra-shift ရဲ့ Function က Range နဲ့ Split ဆိုပြီး နှစ်​မျိုးရှိတယ်​ ၊ Range မှာ2မျိူးးရှိတယ်​ Low Range ​နောက်​တစ်​မျိုးက High range < Low range က gear no 1234> ပြီး​တော့ High range က ကျန်​တဲ့ gear no5678 တိူ့ပဲ ဖြစ်​တယ်​ ... Split မှာလဲ Low split နဲ့ High split ဆိုပြီး ရှိတယ်​ ... Split က​တော့ < gear Up or Down ... + (or) - > .... Range အ​ကြောင်းကို အ​သေးစိတ်​ ​ပြောပြဖို့ မလို​ပေမဲ့ Split အ​ကြောင်းကို ​​ပြောပြဖို့လိုလိမ့်​မယ်​ .... စကားစပ်​ ဘယ်​အချိန်​မှာ Range ရဲ့ Switch ကို နှိပ်​ရမလဲဆို Low range ( Gear no4) က​နေ High range ( Gear no5) ကို ​ပြောင်း​တော့မယ်​ ဆိုရင်​ Range swith ​လေးကို အ​ပေါ် ကလုတ်​တင်​ပြီး ဂီယာ ထိုးနိုင်​ပါတယ်​
ဂီယာတံ မှာရှိတဲ့ Split ဘု​လေးရဲ့ အလုပ်​လုပ်​ပုံက ဒီလိုဗျ ..... Gear ထိုးမဲ့အချိန်​ Lever ​လျှော့ပြီး Clutch နင်းလိုက်​ရင်​ RPM ​လျှော့သွားမယ်​ ဒါဒီအချိန်ကျရ​င်​ Gear ထိုးတယ်​​ပေါ့ဗျာ အဲ့လိုထိုးရင်​ Low split နဲ့ အရင်​ဝင်​ရတယ်​ ... ပြီးမှ ရုတ်​တရက်​ High split ကို ​ပြောင်းတာ​ပေါ့ဗျာ ...ဒါက​တော့ Gear ထ်ိုးတဲ့ ပုံစံ​ပေါ့ ၊ Lever နဲ့ Gear ကို တွဲ​ခေါ်ပြီး ထိုးတဲ့ပုံစံ​ပေါ့ ... အကျိုးသက်​​ရောက်​မှုက​တော့ သာမာန်​ ဂီယာ​ဘောက်​​တွေထက်​ high way road ​တွေမှာ Truck ရဲ့ performance တက်​လာမယ်​​ပေါ့ ... ဆီစားနှုန်းလဲ နည်းနည်း သက်​သာသွားမယ်​
ပြီး​တော့ Gear shifter မှာ ဖြစ်​​နေတဲ့ ပုံစံအပြင်​ Transmission ထဲမှာ ဖြစ်​​နေတဲ့ ပုံစံက​တော့ ကျွန်​​တော်​တို့ ဆီမှာ သူံး​နေတဲ့ 10 speed နဲ့ 12 speed gearbox ​တွေလို ပုံစံ မတူ​တော့ဘူး ... Main shaft အပြင်​ Layshaft2​ချောင်းပါလာပါတယ်​ ... အဲ့အပြင်မှ Split ( Hi-Lo ) ကို အသက်​သွင်း​ပေးတဲ့ Planetary gear အုံကလဲ ပါ​သေးတယ်​ .... Manual ဖြစ်​လို့ Gear အထိုးအပြု​ တွေကို လူက​နေပဲ ထိုးမှာ ဖြစ်​တယ်​ ... Clutch နင်းဖို့ ECA ရဲ့ အကူညီ မပါသလို ... Gear ​ကို ကူထိုး​ပေးဖို့ Pneumatic system သုံး Actuator ​တွေလဲ မပါဘူး
Ultra-Shift ( or ) 18 speed gearbox ​တွေဟာ အထူးသဖြင့်​ Hp မြင်​တဲ့ Engine ​တွေနဲ့ပဲ အထူးကိုက်​ပါတယ်​ ..ဘာလို့လဲ ဆို​တော့ သူကလဲ Engine part ထဲမှာပါတဲ့အတွက်​ Engine ရဲ့ power ကဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်​ပါတယ်​ ... gear ရဲ့အချက်​​ရေ များ​လေ​လေ ​ပေးရတဲ့ Engine ရဲ့ hp ဆုံးရှုံး​လေဖြစ်​တဲ့အတွက်​ 18 speed ကို ရိုးရိုးကား​လေး​တွေမှာ မသုံးတာပါ ... ကားတိုင်းလဲ မသုံးကြပါဘူး ... သူ့ကို အထူးထုတ်​ စွမ်းမြင့်​ Diesel Engine ​တွေနဲ့သာ တွဲသုံး​လေ့ရှိပါတယ်​။
Read: မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ လမ်းမထွက်ပြီး ကားငှားစရာမလိုတော့ဘူး